Nhau - Maitiro ekuvandudza iko kurongeka kwemuchina wekugadzira muchina?
How kuvandudza kururama otomatiki Kuumbwa muchina?
Kuti uvandudze kunyatsoita otomatiki kuumbwa muchina, diki chitubu micheto yetambo yekuparadzanisa inotarisirwa uye yakanyatsogadziriswa. Muchina wekuumba unomhanya zvakanaka uye zvakavimbika, uye iyo hydraulic system inotyaira yakachengeteka mashandiro. Iyo michina yakagadzirirwa ine manipulator, iyo inoderedza mhando yepamusoro uye yekugadzirisa manejimendi mashandiro ebhizinesi pamwe nebasa rinodiwa. Naizvozvo, chakuumbwa dhizaini chakakosha kwazvo.
Muchina wekuumba une hunyanzvi hwakawanda. Kubudikidza nenzira yekuburitsa, iyo jecha rinowanikwa zviri nyore kukonzera kuyerera kwekudonha panguva yakaoma yekugadzira. Aya matekinoroji maviri eruzivo ari nyore kushandisa, asi haisi iyo nzira yakanaka yekugadzira yako pachako. Mune inotonhora bhokisi dhizaini nzira, saizi yeiyo mold inogona kugadziridzwa kudzikisa mutengo wejecha mafuru uye kusunga. Mutengo wejecha catalyst wakanyanyawo kwazvo. Iyo yakakwira iyo bonding reshiyo yegirini jecha, iyo yakaderera kushanda kweinotonhora bhokisi bhokisi kuumbwa tekinoroji.
Iyo yazvino yakajairwa nzira ndeye kushandisa inotonhora bhokisi bhokisi kuumba nzira dzekukanda ine yakaoma maumbirwo uye saizi. Uye zvakare, tichienzanisa nejecha chakuvhuvhu zvinhu zvichikanda multi-alloy Co., Ltd. Enterprise. Inogona kuonwa kubva kune yakakosha-inogadzira oparesheni iyo nekuda kweiyo resin chemistry uye inovandudza isina bhokisi isina kuumbwa michina, yemhando yepamusoro castings inogona kugadzirwa nemutengo wakaderera, izvo zvinowedzera kunatsiridza yakakwira kugadzirwa mutsara wepombi uye marobhoti, uye inoderedza huwandu hwe castings inogadzirwa nemutengo wakaderera. Basa rinodiwa. Richigadzirisa muchina chando chinoumba bhokisi musimboti kugadzira michina chinhu chikuru zvoupfumi kukura.
Sandbox, Semi-Automatic richigadzirisa Machine, Punch Out Muchina, Richigadzirisa vachikanda chinu, Chinwiwa Mould Machine, Chinwiwa richigadzirisa,